ငတ်နေမှန်းသိလို့ – Grab Love Story
ကျနော်တို့ရွာကနည်းနည်းခေါင်တယ်။အိမ်ခြေငါးရာလောက်တော့ရှိတယ်။ရွာမှာကဓလေ့ထုံးစံလေးတွေရှိကြတာပေါ့ဗျ။လူငယ်တွေပီပီအ ပျော်လွန်တာလဲရှိတယ်။ပြသနာမတက်အောင်တော့ရွာကကာလသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းခန့်မောင်ကထိန်းရတယ်။သူကမိန်းမရှိတယ်ဆရာမပေါ့။ဒါပေမယ့်တနယ်မှာကျောင်းပြနေရတယ်။သုံးလတကြိမ်လောက်တော့ပြန်လာလေ့ရှိတယ်။မိန်းမကအိမ်မှာမရှိတော့ရွာအလုပ်ကိုလည်းကူလုပ်လေ့ရှိတာမို့ကာလသားခေါင်း ဆောင်အဖြစ်တာဝန်ပေးထားရတယ်။အခု လည်းကျနော်တို့သူ့တဲအိမ်မှာစတေးချရင်း ထွေရာလေးပါးပြောနေကြတာပါ။ဒီမှာကသူ့ခြံရှိတော့အေးဆေးနေလို့ရတယ်။ “ဟေ့ကောင် ငရဲ” “ဘာတုန်းဟ” “မင်းယောက်ဖဇိုးကြီးလာနေပြီ” “အာတိုးတိုးပြောပါဗျ။ကြားသွားလို့အိမ် တောင်မလည်ရဖြစ်မယ်” “အေးပါကွ ငါတို့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပါ့မယ် “”ဟုတ်ကိုမင်းခန့်” “ဟေ့ကောင်တွေဘာလုပ်နေကြလဲ ” “အေး ကွာ ငါတို့ညကြက်ခိုးပြီးချက်စားမလို့” “ဟေ ဟုတ်လား ” “ဟေ့ကောင်တွေငါမပါဘူးနှော်” “ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုမင်းခန့်” “ဟာ ဒီနေ့မင်းအမလာမယ်လေကွာ” “ဟာ ဒီနေ့တော့ ကိုမင်းခန့်ငလျှင်လှုပ်မှာပေါ့” “ဟားးဟားးလှုပ်မှာပေါ့ကွ” “သိပါတယ်ခင်များကြီးငတ်ပြတ်နေတာ” “ဟားးဟားးး ဖျံသိုရှိသေးလားကိုမင်း” “မင်းဘာလုပ်မလို့လဲ”. “စမ်းကြည့်ချင်လို့” “အေး ရှိသေးတယ်” “ကျနော်နည်းနည်းမျှ” “အေးပါကွာ” “ဒါနဲကိုမင်းရွာထဲမသွားဘူးလား၊အရက်ကလေးဘာလေးဝယ်ဖို့” “သွားမယ်ကွာ မင်းတို့ဒီမှာရှိတုန်း” “ဟုတ်ကျနော်တို့ဒီမှာရှိနေမယ်” “အေးဒါဆိုငါသွားလိုက်ဦးမယ်”. ကိုမင်းခန့်အပြင်ရောက်သွားတော့” “ဟေ့ကောင်တွေ” “ငရဲ ဘာလဲဟ” “ဒီနေ့ဆရာမလာမှာကွ၊ဒီလူကြီးအပြတ်ဆော်မှာသေချာတယ်။” “အေးလေငတ်ပြတ်နေတာပဲဆော်မှာပေါ့” “အေး ငါတို့ဒီညလာချောင်းရအောင်” “ကောင်းသားပဲ” “နေအုံးငါအကြံတစ်ခုရတယ်။
“ဟေ့ကောင်ငရဲဘာအချွန်နဲ့မလို့လဲ” ဒီဘဲကြီးကလုပ်ရင်အရမ်းကြမ်းတာ။ဖျံသိုအားကိုးနဲ့”. “အေးဟုတ်တယ်” “သူ့အိပ်တဲ့နေရာကိုကြည့်အောက်မှာဒေါက် ထောက်ထားတာ” “အင်းဟုတ်တယ်” “ဇိုးကြီးမင်းအဲဒေါက်ကိုဖြုတ်ရအောင်ဖြုတ် ကြာ” “အေး ငါဖြုတ်မယ်” “ငချစ် မင်းကူလိုက်ကွ” “အေးငါကူမယ် ” “ဇိုးကြီးနှင့် ငချစ် တဲအောက်ကိုဝင်ပြီးဒေါက်ဖြုတ်လိုက်တယ်” “ဟေ့ကောင်ငရဲငါဖြုတ်လိုက်တာ အခြေအနေကတဲတဲလေးကျန်တယ်၊ပြိုကျမလားမသိဘူး” “တက်ကြည့်လေ” “အေးငါတက်ကြည့်မယ်” “ဟေ့ကောင်ခုန်မနေနဲ့ဟ” “အဲသွားရုံလောက်နဲ့မသိသာဘူး” “အရမ်းဆောင့်ရင်ကြမ်းပြိုမလားမသိဘူး” “အေးကောင်းတယ်” “တော်ကြာကိုမင်းခန့်လာတော့မယ်၊ဟန်မပျက်နေ” “အေးအေး””ဟုတ် ခဏကြာတော့အရက်နှစ်ပုလင်းဆွဲပြီးကိုမင်း ခန့်မောင်ရောက်လာတယ်။ “အေးမင်းတို့စောင့်နေတာကြာပြီလား” “ရတယ် ကို မင်း” “အေးကွငါချစ်ချစ်လာမှာမို့သွားကြိုလိုက်ဦး မယ်”မင်းခန့်မောင်အိမ်က “ဟုတ်ကိုမင်းကျနော်တို့လည်းပြန်မှာပါ” “‘”အော်အေးအေး ပြန်ကြ ပြန်ကြ” ကျနော်တို့တဖွဲ့လုံးပြန်ခဲ့ကြပြီးညရှစ်နာရီ လောက်မှချိန်းကြပြီးကိုမင်းခန့်မောင်အိမ်ကို ချောင်းဖို့ကြံစည်ကြတယ်” “ရွာဆိုတော့လည်းစောစောအိပ်ကြတာပေါ့ဗျ ကျနော်တို့လူစုံပြီးချိန်မှာတော့ရွာကတိတ် ဆိတ်နေပြီလေ။ “ဟေ့ကောင်တွေသွားကြမယ်” “အေး သွားကြတာပေါ့” “တိုးတိုးလေးလုပ်ကွ” “အေးပါကွာ ဟီးဟီး” ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ဟာ ကိုမင်းခန့်မောင်အိမ်နားကိုမှောင်ရိပ်ခိုပြီးသွား ကြတယ်။အနားကျတော့အသံကြားရတာက “မိန်းမ အိပ်ရအောင်ကွာ” “ရှင်ကလည်းစောပါသေးတယ်” “မစောတော့ဘူးဟ လာပါကွာ၊ငါအရမ်းလွမ်းလို့ပါ” “ရှင်ကလဲလွမ်းပဲလွမ်းနိုင်လွန်းတယ်” “ဟ မင်းရောမလွမ်းဘူးလား” “မလွမ်းဘူး” “အမ် မင်းကမလွမ်းရင်ဘယ်ကောင်ကိုလွမ်းလို့လဲ” “ရှင်နှော်ရှင် တလွဲတွေမပြောနဲ^” “အေး ..နင်ငါ့ကိုမလွမ်းရင်သူများကို လွမ်းတာပဲ”ကိ “ရှင် နှော်ရှင်” “ကဲ နင်လွမ်းလားမလွမ်းဘူးလား” “လွမ်းတယ်ရှင့် လွမ်းတယ်” “လွမ်းတယ်ဆိုရင်လာစုပ်ကွာ” “ဟင် ရှင် ကယောက်ျားပဲလေ ရှင်အရင်လာလုပ်လေ” “အေး အဲဒါဆိုအဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်” “ှရှင်ကလဲ မီးခွက်မီးကြီးနဲ့” “အဲဒါမှပိုမိုက်တာ မီးမှောင်နေရင်စမ်းလုပ်နေရမှာပေါ့ဟ” “အင်းပါရှင် အင်းပါ” “ကိုမင်းမိန်းမဆရာမလည်းမလိုးရတာကြာပြီမို့စိတ်ထဲလည်းအရမ်းခံချင်နေမှန်းသိသာတယ် ဆရာမကလုံးကြီးပေါက်လှဆိုတော့အဝတ်တွေချွတ်လိုက်တာ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေတောင်သားရေယိုမိတယ်။
အိုးကြီးကလည်းနည်းတာကြီးမဟုတ်သလိုနို့ကြီးကလည်းအယ်ထွက်နေတာ။ဆံပင်ဘီးတပတ်ထုံးထားပြီးမီးရောင်အောက်မှာတော်တော်လှနေတာဗျ။ကျနော်တို့လည်းသားရေကိုမြိုချမိတယ်။ “ကိုမင်းရှင် လည်းအဝတ်တွေချွတ်လေ” “အေးပါဟ” ကိုမင်းအဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်တာ လီးကတရမ်းရမ်းဖြစ်နေပြီ ဆရာမကိုကြည်တော့လည်းမျက်လုံးကအရောင်တောက်လို့ကာမစိတ်တွေထနေတာဗျ “ကိုမင်းအိပ်ရာထဲလှဲလိုက်တာ ဆရာမကဖင်ကြီးကုန်းပြီးကိုမင်းလီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးသေးတယ်။ပြီးမှတပြွတ်ပြွတ်စုပ်တာ။ကျနော့်ဖက်ကဆရာမဖင်ကြီးကုန်းနေတာမြင်ရတယ်။စောက်ဖုတ်ကလည်းးပြူးထွက်နေတာကြောင့်ကျနော်လီးကလည်းတောင်နေတာဗျာ။မနေနိုင်လို့ပူဆိုးကိုကွင်းသိုင်းလိုက်ပြီးဂွင်းထုနေရင်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ကိုမင်းလီးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်ပြီး “ကိုမင်းတော်ပြီ ကွာ” “အေးပါဟ” ကိုမင်းလီးကလည်းဆရာမသွားရည်တွေနှင့်စိုနေပြီးမီးရောင်အောက်မှာလက်လက်ထနေတာ ဆရာမကသူ့အလှည့်လည်းပြီးရောအိပ်ရာပေါ်လှဲလိုက်တယ်။ကိုမင်းအလှည့်လေ ကိုမင်းကဆရာမပေါင်ကြားဝင်ပြီးဆရာမပေါင်ကိုဖြဲကားပြီးခေါင်းထိုးဝင်သွားတယ် ဆရာမစောက်ဖုတ်ကိုယက်တာဗျ။ “ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အားဟားးဟားးကိုမင်းရယ်လွမ်းနေတာအရမ်းပဲကွာကောင်းလိုက်တာ ဆရာမရဲ့ညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ ကျနော့်လီးလည်းအရမ်းတောင်နေတာဗျ။ဟို ကောင်တွေလှမ်းကြည့်တော့လည်းအားလုံးကပုဆိုးကွင်းသိုင်းကာချောင်းရင်းထုနေကြပြီ ကျနော်ဆက်ချောင်းလိုက်တယ်။ကိုမင်းက ဆရာမအစေ့ကိုစုပ်နေတာထင်တယ်ဗျ။ တပြွတ်ပြွတ်ကိုမြည်ရော။ “အားးယောက်ျားအရမ်းကောင်းတယ်” “အာ့ အင့်ဟင်းဟင်းးဟင်း” အဲဒီအသံလည်းကြားရော ကိုမင်းတယောက် ‘”အင်းဟားးးဟား “ဆိုပြီးအတင်းပင်ခေါင်းထိုးယက်ပြီးခေါင်း ဖော်လိုက်တာမေးစေ့ရောနှုတ်ခမ်းတွေပါအရည်တွေစိုရွှဲလို့နေတာပဲဗျာ” ကိုမင်းနှုတ်ခမ်းတွေကိုလျှာနှင့်သပ်ယက်လိုက် ပြီး” “မိန်းမလိုးမယ်ကွာ” “အင်း ဟင်းဟင်းးလိုးတော့ဒီမှာအရမ်းကောင်း နေပြီ” ကိုမင်းကဒူးထောက်ပြီးအဖုတ်ထဲလီးကိုင် ထည့်ကာတအားကိုဆောင့်တာ။အိမ်ကလည်းဒေါက်တွေဖြုတ်ထားလို့ တကျွီကျွီမြည်နေတာပဲဗျ။ ကိုမင်းနဲ့ဆရာမကပချစ်နလံထနေတော့မကြားဘူး၊လိုးမြဲတိုင်းလိုးနေတာ။တချက်ဆောင့် တိုင်းကြမ်းခင်းကနိမ့်နိမ့်ဆင်းနေတာ။ကိုမင်းကိုလှမ်းကြည့်တော့လည်းမျက်လုံးမှိတ်ကာတအင်းအင်းနှင့်ဆောင့်နေတာဗျာ ဆရာမလည်းမျက်လုံးမှိတ်ပြီးအော်ညည်းနေတာဗျ။လိုးသံတွေကတဖတ်ဖတ်ဆဖန်းဖန်းနဲ့ ရွာအဝင်ဆိုတော့လူလည်းပြတ်တော့မတရား ဆောင်။မတရားအော်လို့ “ဖုန်း ဖုန်းဖန်းဖန်း ဖောင်းဖောင်းအင့် အားးအင် အားး” “ကျွီ ကျွီ ဂျွတ် ဂျွတ် ဂျွတ်” “လိုးချက်ကလည်းပြင်း တဏှာကလည်းကြီးကြတော့အိမ်ဘာဖြစ်နေ မှန်းတောင်မသိဘူးလေ။ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်လိုးနေတုန်း “ယောကျား ငါပြီးတော့မယ် ဆောင့်ဆောင့်အားနဲ့ဆောင့်အားးးဟင့်” ကိုမင်းလည်းအသားကုန်ဆောင့်တော့တာပဲ “ဖြောင်း ဖြောင်းဖြောင်း ဖန်းဖန်းဖန်း” “ကျွီ ကျီ ဖြောင်း ဖြောင်း ဝုန်း” “ဟာ မိန်းမ အိမ်ပြိုပြီဟ” ကြမ်းခင်းကြီးအောက်ကျွံကြကာနှစ်ယောက်သားအအဝတ်အစားမရှိပဲ အောက်မှာထပ်လျက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ “ဗျို့ ကိုမင်းဘာဖြစ်တာလဲဗျ” “ဟာ ဒီမအေလိုးတွေ ” “အာ မိန်းမအဝတ်အစားတွေ ဘယ်မှာလဲ” “အာကိုမင်းမီးခွက်ကြီးလဲကျပြီးမီးလောင်နေတယ်။ငြိမ်းအုံးလေ” :”ဟာဒုက္ခပါပဲ” “ဟေ့ကောင်တွေလာကြဦးဟ မီးလာငြိမ်းကြအုံး” “ဟာ မလာနဲ့ မလာနဲ့” ကိုမင်းမှာဗျာများနေတာ၊ကျနော်တို့သွားရင်သူ့မိန်းမကအဝတ်အစားမရှိတော့ မီးငြိမ်းပေးဖို့ပြောပြီးမှမလာဖို့တားနေရတယ်။
“သူ့ဟာသူထပြီးပုဆိုးနှင့်မီးလောင်တဲ့နေရာကိုတဖန်းဖန်းရိုက်ပြီး “မအေလိုးတွေ မင်းတို့လက်ချက်မဟုတ်လား ပြီးရင်တော့မင်းတို့ငါနှင့်တွေ့မယ်” ကျနော်တို့လည်းကိုမင်းတော်တော်ပေါက်ကွဲနေမှန်းသိတော့ရွာထဲကိုဖိနပ်ပါချွတ်ပြီးပြေးရ တော့တယ်။အဟီးနောက်ကျတဲ့ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ပဲ။ ကိုမင်းအိမ်ကပြေးလာပြီးနောက်ဇိုးကြီးတစ် ယောက်ကိုမင်းတို့လင်မယားကိုကြည့်လာပြီး ဖီလ်းတက်နေကြသေးတာဗျ။ပြီးမှငချစ်က “ငရဲ မင်းဟိုနေ့ကဒေါ်ရီးမြနှင့်ပြသနာတက်တားလား” “ဟုတ်ဘူးဟ” “ဘာဖြစ်တာလဲ” “ဒေါ်ရီးမြအကြောင်းမင်းသိသားပဲလေ။သတိကမေ့တတ်။အသက်ကလေးဆယ်လောက်ပဲရှိသေးတာ၊ယောကျာ်းသေကတည်းနောက်ယောက်ကျားလဲမယူဘူးလေ၊သူ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့တော်တော်ချစ်ရှာတယ်။သူ့သားကတပ်ထဲဝင်သွားတာအဆက်အသွယ်မရဘူးလေ” “အေးပြောမှာသာပြောစမ်းပါ” “ဒီလိုကွ ငါရွာလူကြီးဆီသွားတာ သူ့စာရောက်နေလို့ပို့ခိုင်းတာကွအဲဒီမှာ “ဒေါ်ရီးမြ ဒေါ်ရီးမြ” “အမ် အသံလည်းမကြားဘူး၊အိမ်ထဲဝင်ခေါ်ဦးမှ” အိမ်ထဲဝင်ပြီး “ဒေါကြီးမြရေ ” “ဟေ့ ဘသူလဲဟေ့” “ကျနော်ငရဲပါ” “အေးအေးငါရေချိုးနေလို့ “ရေချိုးခန်းထဲကလှမ်းအော်ပြေီးပြာနေလို့ ဘာကိစ္စလဲ”ကျနော်အပြင်ကနားထောင်နေ “ဘာကိစ္စလဲ” “ဒေါ်ကြီးမြသားဆီကစာလာတယ်” “ဟေဟုတ်လားငါလာပြီ” ဒေါ်ကြီးမြ အပြင်ကိုကမန်းကတန်းထွက်လာပြီး “ဟေး ငါ့သားဆီကစာလာပြီ” ကျနော်ဒေါ်ကြီးမြကိုကြည့်ပြီးကြက်သေသေသွားတယ်” “ပေးငါ့သားဆီကစာ” “ဒေါ်ကြီးမြ ကိုယ့်ဘာသာလည်းသေချာကြည့်ဦး” “အမ် အမလေး ငါတော့အရှက်ကွဲပါပြီ ” အော်ပြီးအခန်းထဲပြန်ပြေးဝင်သွားတယ်။အ ရှက်ကွဲမှာပေါ့သားဆီကစာလာတယ်ပြောသံ ကြောင့်ဝမ်းသာလုံးဆို့ပြီးလုံချည်မပါပဲထွက်လာတာမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့။ကျနော်လည်းမျက်နှာပူပြီးစာကိုထားခဲ့ကာပြန်လာလိုက်တယ်” “ဟားးဟားးငရဲတော့ဓာပုံရိုက်ခံလိုက်ရတင်္ယ ပေါ့။မင်းအကုန်မြင်ခဲ့လား” “အာမမြင်ပဲနေမလားကွာအမွှေးတွေအများ ကြီးနဲ့ဟ”ဖောင်းကားနေတာပဲကွာ” “ဟေ့ကောင်ငရဲ” “ဘာလဲယောက်ဖ” “လီးယောက်ဖ လားကွ” “မင်းကလည်း အချင်းချင်းချစ်လို့ခေါ်တာကို” “လီးတောင်မခေါ်နဲ့ ” “အေးပါကွာ ဇိုးကြီးရာ” “မင်းဘာပြောချင်လို့လဲဟ” “ငါ မီးမီးနဲ့ညချိန်းထားတယ်ကွ” “ဟုတ်လား ငါတို့လိုက်ခဲ့ရမှာလား” “အေးလေ ကွာ ငါလည်းတစ်ယောက်ထဲမသွားရဲဘူး” “ဟေ့ကောင်ရ သူ့အိမ်ကဝါးထရံအလုံကြီးလေ သူ့အဖေက တံခါးဖောက်မထားဘူးး” “အေး ငါဝါးထရံအပေါက်ဖောက်ခိုင်းထားတယ်” “ဟုတ်လား အဟီးအဆင်ပြေပေါ့” ကျနော်တို့ရွာဓလေ့က ထူးဆန်းတာရှိတယ်။ မိန်းကလေးကိုချစ်ရေးဆိုလို့မိန်းကလေးကကြည်ဖြူရင် အပေါက်ကလေးကလက်နှိုက်ပြီး စကားပြောလို့ရတယ်။သူတို့မကြည်ဖြူရင် အပေါက်ပိတ်ထားတာဗျ။အပေါက်နှိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ မိန်းကလေးကြည်ဖြူလို့ကတော့အပေါက်ကနေစမ်းရတာပေါ့။ပြသနာမရှိရင်ပြသနာမဖြစ်ဘူးပေါ့။ပြသနာရှိလို့ကတော့မိဘမောင်ဘွားတွေနဲ့ကွိုင်တက်ပြီလေ။ အခုယောက်ဖဇိုးကြီးကအခြေအနေကောင်းနေပြီ။သူမသိသေးတာကသူညီမရှင်နှောင်းနဲ့ကျနော်ကလည်းအဆင်ပြေနေတာကိုပဲ။ ပြောသာပြောရတာငချစ်လည်းသူ့ဆော်နှင့်အဆင်ပြေနေတာပဲ။ငချစ်ဆော်အိမ်ကနှစ်ထပ် အိမ်ဖြစ်နေပြီးဆော်ကအပေါ်ထပ်မှာအိပ်တာမို့ငချစ်လည်းကြံရာမရဖြစ်နေတာ။
“ဇိုးကြီး မင်းသွားချင်ရင်ငါတို့လိုက်ခဲ့မယ်” “အေးကွ မင်းတို့ကအခြေအနေကြည့်ကင်းစောင့်ကွာ” “အေးပါကွာ” ညနက်နေပြီဖြစ်တော့နှင်းနှင်းအိမ်ဖက်ချီတက်ခဲ့တယ်။အိမ်အနားရောက်တော့ခြေသံလုံ အောင်လျောက်ရင်း နှင်းနှင်းအိပ်ခန်းဘေးကပ်ကာ “နံရံ ကိုအသာလေးခြစ်ရင်း ” “မီးမီး မီးမီး”ဇိုးကြီးကအသံအုပ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ် အသံ တိုးတိုးကြားလိုက်လိုက်ပြီး “ကိုဇိုးကြီးလား ” “ဟုတ်တယ်မီးမီး” “လာလာ ” ဇိုးကြီးအပေါက်ထဲလက်နှိက်လိုက်ပြီး” “အရမ်းလွမ်းနေတာဟ” “အင်းပါဒီကလည်းသတိရနေတာ” “အာ့ကို ဇိုးဖြေးဖြေးကိုင်လေနာတယ်” “အေးပါ ဟာ” “အာ့ နာတယ် ကိုဇိုး” “မီးမီငါအဝှာကိုင်ချင်လို့” “လုပ်ပြီအပေါ်ပြီးအောက် ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ” “အဟီးကိုမင်းခန့်မောင်တို့အတွဲကိုကြည့်ပြီးငါမနေနိုင်တော့လို့” “သူတို့ကဘာလုပ်နေကြလို့လဲ ” “အဝှာလုပ်နေကြတာ” “အမ်ဟုတ်လား” “အေး ဟ နင့်လက်ပေးစမ်းပါ” “အင်း အင်း” နှင်းနှင်းလက်ကိုင်ပြီး လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်” “ဟင် ထောင်နေပါလား” “အေး ငါအရမ်းတင်းနေပြီ” “ဟင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ” “နင်နံရံဘေး ဖင်ကုန်းပေးပါလား” “ဟင် လုပ်ရဲဘူးတော်” “လုပ်ပါနှင်းနှင်းရဲ့” “အာ အဲလိုလုပ်ရင်ထရံကိုထိပြီးအဘတို့သိမယ်” “ဒီလိုလုပ်လေ ငါအထဲကိုလီးသွင်းပေးမယ်စုပ်ပေးပါလား” “ဟော့တော့ရှင်တော်တော်ထနေပါလား” “လုပ်ပါမီးမီးးရဲ့” “ကဲ အဲလောက်ဖြစ်နေလဲရှင့်ဟာကြီးရှေ့တိုးလိုက်လေ” “အင်း အင်း “ဇိုးကြီးပုဆိုးကိုစလွယ်သိုင်းကာလီးကိုအပေါ်ထဲထည့်လိုက်တယ်” “ပြွတ် ပြွတ် အသံကြားလိုက်ရပြီးဇိုးကြီးလည်းငှက်ဖျားထသလိုတဟင်းဟင်းဖြစ်လာပြီးညည်းနေတာ ကျနော်တို့ကကင်းစောင့်နေရတာအပြင်ကိုမ ကြာင့်မိပဲဇိုးကြီးကိုသာကြည့်နေမိတယ်။
ဇိုးကြီးအရှိန်တက်လာကာ အားမလိုအားမရဖြစ်နေတယ်။ဝါးထရံနားသိပ်ကပ်လို့လည်းမရဘူး။အထဲကလည်းအရမ်း ရှေ့တိုးမရဖြစ်နေတော့ စိတ်ထဲခုလုခုလုဖြစ်နေပုံရတယ်။တော်တော်လေးကြာ လာတော့ဇိုးကြီးစိတ်မရှည်တော့ဘူး။ရှေ့တိုး ပြီးဆောင့်လိုက်တာ။နံရံကိုထိပြီး “ဖုန်း ဖတ် ဖုန်းဘတ် “အသံထွက်သွားတော့ “ဟေ့ဘယ်ကောင်တွေလည်းကွ” “ဟိုက် မီးမီးအဖေကွလစ်မှဖြစ်မယ်ဟေ့” “ဟေ့ကောင်ဇိုးရီးလစ်မယ်” “အေးပြေးဟ ပြေး” ဇိုးရီးလည်းအခြေအနေမဟန်မှန်းသိတော့ပြေးရတာပေါ့မဟုတ်ရင်မီးမီးအဖေရဲ့ငှက်ကြီး တောင်ဓားနှင့်တွေ့မှာလေ ဇိုးရီးနှင်ကျနော်တို့မီးမီးအိမ်ဖက်ကပြေးလာပြီးတော့ငချစ်အကိုအိမ်ဖက်ကိုခြေသံလုံလုံနှင့်ပုန်းဖို့နေရာရှာရတယ်။အဲဒီအချိန်ပဲငချစ်အကိုတို့အိပ်ခန်းဘက်က “ဖန်း ဖန်း ဇွိ ဖန်း ဖုန်းဖုန်းးဖုန်း’” “အာ့ အင်း အင်း ဟင့် အာ့” “ဇွိ ဗျစ် ဗျစ် ဗြိ ဗြိ ” “အိုး ရှီးးရှီးး ကောင်းတယ် အားး” “ဟေ့ကောင့်ငချစ်ကြားလား” “အေး ငါ့အကိုတော့ဆွဲနေပြီကွ” “အေး ဟ၊ခဏနေဦး ငါအော်လိုက်မယ်” “သူခိုး ဗျို့ သူခိုးး သူခိုး” “ဟေ့ကောင်တွေသူခိုး ဟိုမှာ ဟိုမှာ ” “အေး ကွ မြင်ပြီ လိုက် လိုက်” “ဝုန်း “တံခါးဆွဲဖွင့်သံကြားလိုက်ပြီး “ဟေ့ကောင်တွေဘယ်မှာလဲသူခိုး” “ရှေ့မှာ အကိုဓာတ်မီးပေး” “အေး ရော့ရော့” ကျနော်ငချစ်အကိုဆီကဓာတ်မီးယူပြီးဟိုထိုးဒီထိုးလုပ်ပြီး “ငါလိုးမသူခိုးမြန်လိုက်တာပြေးသွားပြီ” “ဟေ မင်းတို့ကလည်းသောက်သုံးကိုမကျဘူး” “မှောင်နေတာကိုးဗျ” ကျနော်ငချစ်အကိုကိုဓာတ်မီးနှင့်ထိုးကြည့်လိုက်တယ် “ခြိ ခြိ ” “ဟ ဘာလဲကွ” “အကို့လုံချည်ပြန်ကြည့်ပါအုံး” “ဟာ ” “ဟားးဟားးး” “ဟိုက် ငါ့မိန်းမလုံချည်ကြီးဟ” “ဟားးးဟားးး” “ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကိုကြီး’” “အေးကွာ မင်းတို့သူခိုးလို့အော်တာနဲ့ငါလည်းတွေ့ရာကောက်စွပ်လာတာ အရှက်တော့ကွဲပြီ” “ဟားးဟားးဟားး ” “မအေလိုးတွေ မရယ်နဲ့ လီးပဲ” မရယ်နဲ့ဆိုမှရယ်ချင်လာကြကာ “ဟားးဟားးးဟားး” “ဒီခွေးကောင်တွေတော့ကွာ” “ဟားးဟားးးးဟားးး” နောက်တနေ့ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေစုမိပြီး “ဇိုးရီး” “ဘာလဲကွ” “ဟိုနေ့ကကြက်ခိုးစားဖို့ပြောပြီးမခိုးစားဖြစ်ဘူး” “အေးဟုတ်တယ်ကွ” “ဒီနေ့လုပ်ကြမယ်” “အေးကောင်းသားပဲ” “ဘယ်အိမ်ခိုးမလဲ” “ဇိုးရီးမင်းအိမ် ကြက်ရှိတယ်မလား” “အေးလေ” “မင်းအိမ်ခိုးရအောင်” “အေး ရတယ်” “ပြီးရင်ကိုမင်းအိမ်မှာချက်မယ်” “အေး ဟုတ်တယ်” “မင်းအိမ်ဆိုတော့မင်းကအထာသိပြီးသားပဲ” “အေးသိတယ်လေ ” “မင်းနောက်ကငါလိုက်ခဲ့မယ်” “အေးအေး” ငချစ်ကအိမ်ရှေ့ကစောင့်ကွ” “အေးရတယ် ငါစောင့်မယ်” ည ဆယ်နာရီလောက်ကျတော့ကျနော်တို့ဇိုးရီး အိမ်ကိုသွားကြတယ်။
ဇိုးရီးမသိတာတချက်က တော့သူညီမရှင်နှောင်းနှင့်ကျနော်အချိတ်အဆက်လုပ်ထားတာကိုမရိပ်မိတာပါ။ “ဒီလိုနဲ့ခြံဝင်းထဲဝင်ပြီးဇိုးရီးကရှေ့ကနေ ကြက်ခြံဖက်လစ်တော့ကျနော်နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။အိမ်အနားကကပ်ပြီးရှင်နှောင်းအခန်းဖက်ကိုကပ်ပြီး အသာလေးနံရံပုတ်လိုက်တော့ “ကိုရဲလား ” “အင်း ရှင်နှောင်း” “ရှင်းနှောင်းကပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ပေးတော့ကျနော်အခန်းထဲကျော်ဝင်လိုက်တယ်။ပြူတင်းပေါက်ပိတ်ရုံရှိသေးတယ်” ကြက်ခြံဖက်က “ကတော် ကတော် ဖန်း ဖန်းဖန်း” “ဟိုက်ဇိုးရီးတော့လုပ်ပြီသေချာမဖမ်းဘူး” ရွာတော့ပတ်ပြီ” “ဇိုးရီးအဖေအိပ်ရာကနိုးလာပြီး” “ဘယ်ခွေးသူခိုးလဲကွ” “ငါ့ကြက်လာခိုးတာ” “ကိုရဲကြက်ခိုးတာလား”.”အင်း” “ဖေဖေနိုးသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ” “ခဏလေးအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြမယ်” “အင်း ပါ” ကျနော်လည်း ရှင်နှောင်းကိုဖက်ပြီးအိပ်ရာပေါ်လှဲရင်းနမ်းလိုက်တယ်၊။ရှင်နှောင်းရောကျနော်ရောရင်တွေခုန်နေတာတဒိန်းဒိန်းနဲ့” ရှေ့မှာတော့ရှင်နှောင်းအဖေသောင်းကျန်းနေတာ” “ငါ့လိုးမသားတွေ ” “ငါ့ကြက်ခိုးတာ စားပေါ့ကွာ” “အဲအသားစားရင်လည်းစားပေါ့၊အရိုးကိုက်ပေါ့၊အေး လည်ချောင်းရိုးကိုက်လို့ကတော့ငါ့ဟာကိုစားသလိုပဲစားကြ” “ခြိ ခြိ” “ရှင် ဘာလို့အဲလောက်ကြီးပြောနေတာလဲ” “ရှင် အိပ်ရာထဲလာတော့လေ” “မလာဘူးကွာ” “မလာရင်အပြင်မှာပဲအိပ်တော့” “အာ မိန်းမကလဲ လာပါပြီကွာ” ကျနော်ကြားပြီးရယ်ချင်နေတာ” တော်တော်လေးကြာတော့ အသံတွေထွက်လာတယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “ရှင်မကြီးမငယ်နဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ” “အာ မိန်းမကလဲ ချစ်မလို့ဟ” “တော်ပါ၊ခုဏက ရှင့်ကြက်လူခိုးသွားပြီ၊ရှင်ကအခုလုပ်မလို့လား” “ခိုး ရင်လည်းခိုးပါစေကွာ” “ရှင်ဒေါသထွက်နေတာမလား” “ထွက်တော့ဘူး” “တကယ်လား” “တကယ်ပါကွာ” “ကလေးတွေပျော်ချင်ပါးချင်လို့ခိုးတာ၊ရှင်စိတ်ဆိုးသေးလား” “မဆိုးတော့ဘူး” “တကယ်နှော်” “အေးပါမိန်းမရ” “ဟင်း မဟုတ်ရင်ငတ်သွားမယ်” “အေးပါကွာ မိန်းမကလဲ” ခနနေတော့အသံတွေကတပြွတ်ပြွတ်ကြားရပြန်တယ်။ ကျနော်နဲ့ ရှင်နှောင်းမှလည်းရင်တွေခုန်နေပြီး ရှင်နှောင်းနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ် “ဟွန့် က်ိုရဲနှော်” သူဘာပဲပြောပြောမရတော့ဘူးဗျ။ကျနော်သူ့နို့စို့မှာမို့သူ့အကျီင်္ ကိုလှန်လိုက်တယ်။ညအိပ်မှာမို့ဘာအခံဝတ်မထားတာကြောင့်ကျနော်အတွက်အဆင်ပြေနေတာပါ။ကျနော်သူ့ချိုချိုတွေကိုတလှည့်ပြီးတလှည့်စို့လိုက်တာသူတို့သီးခေါင်းတွေတောင်မာ နေပြီဗျ။
ချစ်သူနဲ့အိပ်ရာထဲတွေ့ရတဲ့အပြင်ဟိုဘက်ကသူ့အဖတို့ရဲ့စကားသံကလည်းတဏှာစိတ်ကိုကြွစေတာကိုး။ကျနော့်လီးကလည်းတအားတောင်နေတာလေ။ “အာ့ ကိုရဲ ” အသံကကြိတ်ထွက်လာတယ်ဗျ။ဟိုဘက်ကယွခမကြီးတွေကလုပ်တောင်နေပြီ။ကျနော်လည်းနို့တပြွတ်ပြွတ်စို့ရင်းအဖုတ်ပါကိုင်လိုက်တယ်။အဖုတ်လည်းရွှဲနေပြီနို့စို့ပြီး အဖုတ်ကိုနမ်းလိုက်သေးတယ်။ဆပ်ပြာမွှေးနံ့တောင်ထွက်နေသေးတယ်။ကျနော်လည်းအားတက်ပြီး သူ့အဖုတ်ကိုယက်လိုက်တော့ “အာ့ကိုရဲလုပ်နဲ့လေ ငရဲကြီးပါ့မယ်” “ကြီးဘူး ငါကငရဲပဲလေ” ကျနော်ပြောရင်းဆိုရင်းနှင့်ပဲပေါင်နှစ်ဘကကိုအောက်ကလက်လျိုပြီးပေါင်ကိုကိုင်ကာပိပိကိုပါးစပ်ကြီးအပ်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်အရွတ်ဖတ်လေးကိုစုပ်ပြီးမှလျှာနှင့်အစေ့ကိုကလော်လိုက်တယ်။ စောက်ခေါင်းထဲကိုလည်းလျှာဝင်နိုင်သမျှဝင် နိုင်အောင်အဖျားစုချွန်ပြီးလျှာထိုးသွင်းကာလျှာစောင်းတိုက်လိုက်တော့” “အင်းးဟင်းးဟင်းး ဟီး” “သမီးရေရှင်နှောင်းဘာဖြစ်တာလဲ” “ဘာ မှဖြစ်ဘူးမေမေ ဗိုက်အောင့်လို့ပါ” “ဆေးသောက်ထားလား” “သောက်ပြီးပါပြီမေမေ” “ကျနော့်လန့်သွားပေမယ့်သူ့အမေအခုချိန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။သူယေ့ာကျားနှင့်လိူးနေတာကိုး” ကျနော်ဆက်ပြီးလျှာစောင်းတိုက်ပေးလိုက်အစေ့ကို စုပ်လိုက်တာ။ရှင်နှောင်းကကျနော့်ပါးစပ်ကိူအဖုတ်ကြီးတွန်းတွန်းပြီးလုပ်နေလို့ကျနော်ကသဘောပေါက်တယ်။ရှင်နှောင်းတော့ဖီးတွေဖြစ်နေပြီ စောက်စိလေးကိုစုပ်ပေးလေ ရှင်နှောင်းကညည်းရင်းစောက်ဖုတ်ကိုကျနော့်ပါးစပ်ထဲအတင်းတွန်းပေးလေဖြစ်နေတာ “ပလပ် ပလပ် ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ်” “အာ အားးကောင်းလိုက်တာ ဟီး အာ့အာ့” ကျနော်လည်းအားရအောင် မှုတ်ပြီးလိုးရအောင်လုပ်ကာ ဒီကြားထဲရှင်နှောင်းအဖေတို့အခန်းဘက်နား စွင့်ရသေးတယ်။ငြိမ်နေရာကချက်ဆောင့်နေတာကြောင့်ကျနော်လည်းတဏှာစိတ်ငယ်ထိပ်ကိုကပ်နေပြီ။ရှင်နှောင်းပေါင်ကြားနေရာဝင်ယူကာလီးကိုအဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျောက် ပွတ်တိုက်လျှောချပြီးအဖုတ်ထဲကိုလီးထိုး ထည့်လိုက်တယ် “ဗျစ် ဗျစ် ပလွတ် ပြွတ်” “အု ကျွတ် ဟုဟု အား ကိုရဲနာလိုက်တာ” “ရှူးတိုးတိုး” လီးကတဝက်ကျော်လောက်ပဲဝင်သေး။အဖျားကတင်းပြီးဖြစ်နေတာလေ။
တကယ်အပျိုစစ်အလိုးမခံရသေးတဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့လန့် ဖြတ်ပြီးကျနော့်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းပြီးရှေ့မဆက် ရအောင်လုပ်တာပါ ရှင်နှောင်းကအတင်းကိုကျနော့ရင်ဘတ်ကြီးတွန်းထိုးရင်းအော်ညည်းတယ် ကျနော်လည်းမရရအောင်လိုးသွားမှာပဲဆိုပြီး ရှင်နှောင်းအစေ့ကိုလီးတတ်ထားရင်းသာသာယာယာလည်းပွတ်ပေးရတော့တာပေါ့ ရှင်နှောင်းစိတ်တွေထလာပြီးတအင်းအင်းတဟီးဟီးနှဲ့ညည်းလာတော့မှ လီးကိုအတုံးထိသွင်းလိုက်တာ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြိ ဗြိ ဇွိ ဇွိ” “အာ့လားးလားသေပါပြီ” လီးအဆုံးထိဝင်သွားတော့မှကျနော်ကရှင် နှောင်းနို့ကိုကုန်းစို့ပြီး လီးကိုတဖြေးဖြေးလိုးလိုက်တယ် ။ကျနော်လိုးနေသလို ရှင်နှောင်းအဖေတို့ကလဲလိုးပွဲဆင်နေတာပဲလေ စိတ်ကအရမ်းကိုကြွတက်နေပြီး အဖုတ်ကလည်းကြပ်တာကြောင့်ကျနော်လည်းကြာကြာလိုးလို့မရသလိုသူ့အဖေလိုးပြီးချိန်မှာသူ့အမေအခန်းထဲရောက်လာရင်ပြသနာရှိနိုင်တာကြောင့်အချိန်ဆွဲလိုးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အမြန်လိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်း “ဖန်း ဖန်း ဇွိ ဖန်း ဖုန်းဖုန်းးဖုန်း’” “အာ့ အင်း အင်း ဟင့် အာ့အာ့ရှီးရှီး” “ဇွိ ဗျိ ဗြိ ဖတ် ဖန်း ဖန်း ဖန်း” “အားး ရှီးရှီး အာ့အာ့ အားးအီး အီး” ရှင်နှောင်းတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာကာ တဟီးဟီးတအင်းအင်းအော်နေတယ်။အဖုတ်ထဲကလည်းလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်ရှင်နှောင်းပြီးသွားမှန်းသိသွားကာကျနော်လည်းအချစ်ငါးဆယ်ခန့်ဆောင့်လိုက်လို့သုတ်တွေပန်းထွက်သွားတယ် “ကိုရဲ ဒီမှာညစ်ပတ်ကုန်ပြီမနေတတ်တော့ဘူးး” “ရေဆေးလိုက်လေရှင်နှောင်း” “အင်း ဆေးလိုက်မယ် အိမ်သာဖက်လိုက်ပို့” “အင်းအင်း လိုက်ပို့မယ်” ရှင်နှောင်းနဲ့ကျနော်အိမ်သာဖက်ရောက်တော့ ရှင်နှောင်းကအိမ်သာဖက်ဝင်ပြီးရေဆေးနေ တယ်။
ကျနော်လည်းသေးပေါက်ချင်လာတယ် “ရှင်နှောင်းငါလည်းဝင်မယ် ” “အာကိုရဲကလည်းဒီမှာပြီးပြီ” “အေးပါ” ကျနော်သေးပေါက်မလို့အိမ်သာအဝင် ရှင်နှောင်းကအထွက် “သမီးလေးဗိုက်အောင့်တုန်းလား” “ဟိုက် ရှင်နှောင်းအမေ” သူလည်းသောက်ဖုတ်ဆေးရအောင်လာတာ ဖြစ်မယ်။ငါတော့ရွာပတ်ပြီ ဘယ်ရှောင်ရမှန်းမသိတော့အိမ်သာထုတ်တန်းကိုတွဲလွဲခေါ်စီးပြီးခြေထောက်ကိုတဖက်ထုတ်တန်းပေါ်တင်ရတော့တယ် “ကဲသမီးသွားသွားမေမေအိမ်သာတက်လိုက်အုံးမယ်” “ဟုတ်အမေ ဟုတ်” ရှင်နှောင်းထွက်သွားမှန်းသိတယ်။ကျနော်ရွာ ပတ်နေပြီ သူ့အမေကအိမ်သာတက်တယ်။သူတို့ကအိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းတွဲထားတော့ရေဆေးရင်ဒီ မှာပဲဆေးရမှာလေ။သူ့အမေ ကရေတခွက်ခပ်ပြီးအဖုတ်ကိုလောင်းတယ်။ ပြီးတော့ဘယ်လက်ကြီးနှင့်အဖုတ်ကိုပွတ်ဆေးနေတယ်။ထုတ်တန်းကိုဆွဲခိုပြီးနေတဲ့ကျနော်မခံနိုင်တော့ဘူးလက်မောင်းတွေအောင့်နေပြီ။ခါးလည်းညောင်နေပြီ။ရှင်နှောင်းအမေမပြီးသေးဘူးအီးဆက်ပါပြန်တယ်။ဆိုးရွားတဲ့အီးနံကမခံနိုင်တော့ဘူးလက်အံသေလာလို့ခြေနှစ်ချောင်းအသာကလေးချရင်းရှင်နှောင်းအမေအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူကတော့သူ့ဘာသာအီးပါနေရင်းကျောမလုံလို့လားမသိဘူးနောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ ကျနော်လည်းအတင်းကာရောထွက်ပြေးရ တော့တယ်ဗျာ။ “ဟေ့ ဟေ့ လူ လူ” “ရှင်နှောင်းအမေ လန့်ဖြတ်အော်တာကြောင့်ရှင်နှောင်းအဖေအိမ်နောက်ဖက်ပြေးထွက်လာလို့ကျနော်လည်း အိမ်ရှေ့ကပြေးထွက်ခဲ့ရတော့တယ်ဗျာ။
ကျနော်အိမ်အပြင် ဘက်ပြေးထွက်ရင်းအရီးမြခြံဖက်ရောက်လာတော့ ဘူးစင်အောက်ပြေးဝင်ရင်း ဘူးသီးတစ်လုံးခိုးကာကိုမင်းအိမ်ဖက်လှည့်လာလိုက်တော့တယ်။ ကိုမင်းအိမ်ရောက်တော့ “ဟေ့ကောင် ငရဲ” “ဘာလဲ ကွ ဇိုးရီးရ” “မင်းဘယ်သဝေထိုးနေတာလဲ” “မင်းအဖေကိုကြောက်လို့ပုန်းနေရတာ၊လီးတဲ့မှ အိပ်နေတဲ့ကြက်ဖမ်းတာအသံထွက်ရတယ်လို့” ခပ်တည်တည်လေးပိတ်ဟောက်လိုက်တယ် “ငါကအကောင်ရွေးနေလို့ကွ” “လီးတဲ့မှ မင်းအဖေဆဲတာလဲကြည့်ဦး” “ဘယ်လိုဆဲလဲ” “လည်ဆစ်ရိုးစားရင်သူ့လီးစားတာနှင့်အတူတူပဲတဲ့” “ဟားးးးဟားး” “ရယ်မနေနဲ့အဲလစ်ဆစ်ရိုးမင်းပဲစားတော့” “လခွမ်းတဲ့မှာကွာ” “ကိုမင်းရောဘယ်မှာ” “ကြက်သားဟင်းချက်နေတယ်” “အေးအေးငါဘူးသီး ခွဲလိုက်ဦးမယ်” “ကိုမင်း အရက်ရှိလားဗျ” “ရှိတယ်” “ချရအောင်” “ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့လဲ” “မောလာလို့” “ဟိုကောင်တွေတောင်သောက်ပြီးပြီ။” “ကဲသောက်သောက်” ကျနော်လည်းနှစ်ခွက်ဆက်တိုက်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ မှပက်လက်လှန်ရင်း ရှင်နှောင်းနဲ့တွေ့ ခဲ့တာစမြုံပြန်တွေးရင်း ဇိုးရီးမိဘတွေကိုပါမြင်ယောင်ရင်းရယ်ချင်လာလို့ “ခြိ ခြိ ခြိ” “အာဒီကောင်ဘာဖြစ်လာတာလဲ” “ဇိုးရီးမင်းလုပ်တာနှင့်ငါသာထဲပုန်းနေရတာ “မင်းအမေ အီးလာပါတာနှင့်တွေ့တော့ပြေးလိုက်ရတာကွ””ဟားးဟားးးဖြစ်ရမယ်ကွာ” “ဟေ့ကောင်ငရဲ ” “ဘာလဲကွ” “မင်း ငါညီမကိုချောင်းတာလား” “ဟုတ်ပါဘူးကွာ” “အေးကွာငါမီးမီးနှင့်တွေ့တာအဆင်မပြေဘူး” “အေးလေ မင်းကငစမန်အရမ်းထတာကိုးကွ” “အေးကွာ ငါအရမ်းလုပ်ချင်နေတာ” “မင်းအိမ်ထဲဝင်မှရမှာပဲ” “အေး မနက်ဖြန်သူ့အမေတို့မြို့သွားမယ်ကြားတယ်” “အေး မင်းသွားမလို့လား” “သွားမယ်ကွာ” “ပြောပြီးပြီအိမ်နောက်တံခါးစေ့ထားမယ်ပြောတယ်” “အေးလုပ်ကွာ” ထိုနေ့ကမူးပြီး ကြက်သားနှင့်ဘူးသီးချက်တာကိုစားသောက်ပြီးကိုမင်းအိမ်မှာပဲအိပ်လိုက်တယ် မနက်မိုးလင်းတော့ပြသနာတက်တော့တာပဲ ဇိုးရီးအဖေက သူ့မိန်းမကိုချောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြသနာကြောင့်ရွာလူကြီးကိုတိုင်တာပေါ့။ကိုမင်းပဲလိုက်ရှင်းရတယ်။ ရွာလူကြီးက “ဟေ့ကောင်ငရဲ မင်းဦးသာရဲ့မိန်းမကိုချောင်းတယ်ဆို” “ဘုရားစူးရပါရဲ့ဗျာ၊ကျနော်မချောင်းပါဘူး” “အဲဒါဆို မင်းဘာလို့ရေချိုးခန်းထဲရောက်နေတာလဲ” “ကြက်ခိုးရင်းဦးလိုက်လို့ပြေးပုန်းတာပါ” “အဲဒါဆိုကြက်ခိုးတာလဲမင်းပေါ့:’ “ကျနော်ကအဖော်လိုက်တာပါ၊ခိုးတာကဇိုးရီး” “ဟေ ဒီမအေလိူးတော့ကွာ” “ကဲရွာသူကြီးဒီကောင်ဝန်ခံပြီပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု့ပဲ” “ဟာ ဦးကလည်းမနေ့ကပြောတော့ကလေးတွေပျော်ချင်လို့ခိုးတာခိုးပါစေဆို” “ဘာကြ” “စိတ်ဆိုးသေးလား ၊မဆိုးဘူးဆို” “ဘာကွ ဟေ့ကောင် ဟေ့ကောင်တော်တော့တော်တော့ ..မင်းး မင်း တော့ကွာ” “ကဲပါအကိုကြီး အခုဟာကအကိုကြီးသားလည်းပါတယ်လေ၊ခိုးတာကအကိုကြီးသားပဲအရေးယူရင် ဇိုးရီးကိုအရင်အရေးယူရမှာ၊ပြီးတော့ကလေးတွေကအပျော်ခိုးတာကြောင့်ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
ငရဲလည်းခင်များကိုကြောက်လို့ကြံမိကြံရာကြံတာပါ” “ဟေ့ကောင်ငရဲ မင်းတော့သတိထားနေ” “ဟုတ်ကဲ့ဦး..နောက်မဖြစ်စေရဘူး” ဟီးမနေ့ကသူ့အကြောင်းဖော်လိုက်လို့သူအရှက်ကွဲမှာစိုးလို့သာပြသနာအရှည်မလုပ်သွားတာပါ။အမှန်ကရှင်နှောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ထင်ပြီးပြသနာရှာတာပါ။ ညနေရောက်တော့ အရက်နှစ်လုံးကိုလူလေးယောက်သောက်ပြီး မှောင်လာမှ “ငရဲ ” “ဟေ ” “ဒီနေ့ငါ မီးမီးအိမ်သွားမယ်” “အေးသွားသွား” “ငါတို့လိုက်ဖို့လိုလား” “မလိုက်နဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ မီးမီးအဖေမရှိဘူးလေ” “အေးပါကွာ သွားသွား” ဇီုးရီးလည်း မြန်မြန်ပဲလစ်သွားတယ် အမှန်တော့မီးမီးမိဘတွေမြို့တက်သွားပေမယ့် အိမ်မှာသမီးပျိုလေးတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ချင်တာကြောင့်တူမတစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာညီအမချင်းစောင့်ရှောက်ရအောင်တူမဖြစ်သူ နှင်းဖြူကိုခေါ်ခိုင်းပြီးစောင့်ခိုင်းထားတယ်။နှင်းဖြူကအိပ်တာကြမ်းလွန်းလို့မီးမီးခင်မျာအဖေအမေအခန်းထဲဝင်အိပ်ရင်းစောင့်နေတာပေါ့။ ဇိုးရီးလည်းမူးလည်းမူးနေပြီးညနက်မှမီမီးတို့အိမ်ကိူဝင်ရဲတော့တယ်။မီးမီးမှာစောင့်နေရင်းကညနက်လာတော့မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားရတာပေါ့လေ။ ဇိုးရီး ကနောက်ဖေးပေါက်စေ့ထားတဲ့တဲ့အခန်းကနေပြီးမီးမီးအိပ်ခန်းဖက်ကိုမှောင်မှောင်မည်းမည်းစမ်းဝင်ရပြီး မီးမီးကိုစမ်းလိုက်တယ်။ “ဟာ မီးမီးအိပ်ပျော်နေပါလား” “အံမယ်ငါလာမှာသိလို့လုံချည်တောင်ကျွတ်နေ ပါလား” “ကဲငါ မှုတ်ပြီးနှိုးမယ်ကွာ” အဖုတ်နေရာကိုစမ်းပြီးဇိုးရီးလျှာနှင့်ယက်လိုက်တယ်။ပြီးမှပေါင်ကိုကားကာကာမဖူးလေးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြီးနေချိန်နှင်းဖြူမှာအိပ် ပျော်နေရာက နိုးလားပြီး မိမိအဖုတ်ကိုအယက်ခံနေရပါလားလို့တွေးမိပြီးတသက်နှင့်တစ်ကိုယ်အဖုတ်အယက်မခံဘူးသေးတော့အရသာတွေ့ကာငြိမ်နေလိုက်တယ်။ မိမိစောက်ဖုတ်ကလည်းဘယ်သူမှအခုလိုပယ်ပယ်နယ်နယ်အကိုင်မခံရဖူးသေးတော့ကာမစိတ်တွေလည်းတအားကိုကြွလာမှန်းသိပြီးအလိုလိုညည်းလာမိတော့တာပေါ့။အဖုတ်ကအရည်တွေလည်းဇိုးရီးတံတွေးတွေပေါင်းပြီးရွှဲရွှဲစိုနေ ပြီလေ။ ” အာ့ …အင်းဟင်း ဟင်းကောင်းလိုက်တာ” ဇိုးရီးမှာမူးနေတော့နှင်းဖြူအသံနှင့် မီးမီးအသံကိုမသဲကွဲတော့ဘူးလေ။
ကာမစိတ်တက်တဲ့အသံကပုံမှန်အသံမဟုတ်တာလဲပါတာပေါ့ “နှင်းဖြူ ဇိုးရီးခေါင်းလှမ်းကိုင်ပြီးအဖုတ်ထဲကို လျှာနှင့်မထိထိအောင်ဆွဲသွင်းရင်း တဟင်းဟင်းညည်းကာခါးအောက်ပိုင်းကိုကြွပေးနေတော့ဇိုးရီးလည်းခေါင်းမဖော်နိုင်ပဲမူးမူးနဲ့အသည်းအသန်ယက်ပေးလိုက်တာ။နှင်းဖြူမှာကြွနေတဲ့ခါးအောက်သိုဖုန်းကနဲပစ်ချရင်း “အား ကောင်းလိုက်တာ အိုး အိုး ရှီးရှီး” ဇိုးရီးလည်းလီးကအရက်ရှိန်ရောမှုတ်လိုက်ရတဲ့အရှိန်ကြောင့်အရမ်းတောင်လာပြီး လိုးဖို့ရာအတွက်ပေါင်ကြားဒူးထောက်ဝင်ကာ လီးကိုပိပိနှင့်တေ့လိုက်ပြီးခါးကိုကိုင်ပြီးဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဘွတ်” “အာ့ ဖြေးဖြေး အားနာလိုက်တာ” “ဇိုးရီးမူးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ စိတ်ကထိန်းမရတောဘူး” ဇက်တိုက်ဆိုသလိုအားသုံးပြီးလိုးလိုက်တော့လီးဝင်သံတဘွတ်ဘွတ်နဲ့ဥရိုက်သံတဖတ်ဖတ်ကညအချိန်မှာဆူညံနေတော့တာပဲ နှင်းဖြူလည်းကာမစိတ်တွေတအားကြွပြီး တအင်းအင်းဆူညံနေကာဘေးအိပ်ခန်းမှာရှိနေတဲ့မီးမီးကိုမေ့သွားပြီး၊တဟင်းဟင်းညည်းမိတော့တယ်။လိုးချိန်ကြာလေဇိုးရီးကအားနဲ့ဆောင့်လေ နှင်းဖြူကအော်ညည်းလေ “ဘွတ်ဖ တ် ဖတ် ဖန်းဖန်းဖန်း” “အာ့ အင့်ကောင်းတယ် အိုးရှီးရှီး” “ဇွိ ဗျိ ဗျိ ဘွတ်ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” “အာ့အင့် အိုးရှီးရှီးအားပြီးပြီ၊ပြီးပြီ အား” တဖက်အခန်းကဆူညံသံနှင့်လိုးသံတဖွတ်ဖွတ်ကြောင့်မီးမီးလန့်နိုးသွားရတယ်။ “ဟင် မနှင်းဖြူ အသံပါလား” “ဘယ်သူနဲ့လဲသိဘူး” “မီးမီးပြီးသွားပြီလား၊ကိုဇိုးလည်းပြီးတော့မယ်” “ဘွတ် ဖန်းဖန်းဘွတ်ဇွပ် ဇွိ ဖတ် ဖန်းဖန်း” “ဟင်ကိုဇိုးရီးအသံပါလား ၊ဟင် နှင်းဖြူနှင့်လူမှားသွားပြီ ထင်တယ်” “ရက်စက်လိုက်တာကိုဇိုးရီးရယ်” မီးမီးရင်ထဲမချိမဆန့်ခံစားလိုက်ရပြီးငိုချင်လာလို့ခေါင်းအုံးထဲမှောက်ကာငိုချလိုက်ပြီးမှ ဟင်းသူတောင်လုပ်ရက်သေးတာ။သစ္စာမရှိဘူး ငါက လည်း “………………” “တွေ့ကျသေးတာပေါ့ကိုဇိုးရီးရယ်” လို့တွေးနေတုန်း၊ဇိုးရီးကပြီးသွားလို့အိမ်ထဲကအသာအယာလေးတံခါးဖွင့်ကာထွက်သွားပါ တော့တယ် ” မနေ့ညကအကြောင်းဇိုးရီးပြောပြလို့ ကျနော်တို့သိပြီးပြီ။ “ဟေ့ကောင်တွေမနေ့ညကငါမူးနေတာဟ၊ငါလုပ်တာမီးမီးမဟုတ်လောက်ဖူးကွ” “ဟေ ” အာ့ဆိုဘယ်သူလဲဟ” “နှင်းဖြူထင်တယ်” “ဟာ နှင်းဖြူဖင်ကြီးကအရမ်းမိုက်တာမင်းကံ ကောင်းလှချည်လားဟ” “ကံကောင်းတယ်လုပ်မနေနဲ့ဒီမနက်မီးမီးငါ့နဲ့တွေတာတောင်စကားမပြောတော့ဘူး” “ဟေ ” “နှင်းဖြူကတော့ပြုံးစိစိနဲ့ဟ” “အင်း မီးမီးကသဝန်တိုတတ်တယ်ဟ” “အေး ငါလည်းအဲဒါကိုစိတ်ပျက်တာ” “အံမာ နှင်းဖြူနဲ့တွေ့တော့ဒီစကားပြောပြီပေါ့” “အေးကွသူကအရမ်းမိုက်တယ်၊တအိအိနဲ့ကွာ” “အမ် မင်းနှင်းဖြူကိုကြိုက်သွားပြီလား” “အေးကွာအခုမှအချစ်ကိုတွေ့သလိုပဲ” “ဟေ” “မီးမီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “ခေါက်ထားလိုက်မယ်” “ဟေ့ကောင်တွေ ” “ဘာလဲငချစ်” “မင်းတို့ပဲအဆင်ပြေနေကျတယ်။ငါလည်းတွေ့ချင်တာပေါ့ကွာ” “အေးတွေ့ချင်ရင်ကြိုးစားပေါ့ကွ” “ငါလည်းကြိုးစားထားတယ်အိမ်ပေါ်တက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမယ်” “အေးမင်းကောင်မလေးအိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်ကွ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” “အေးမင်းတို့ကူပေါ့ကွ” “ကူညီချင်ပါတယ်ကွာ” “ဒါပေမယ့်ဒိုးခရောက်မယ်” “လုပ်မနေနဲ့လှေကားနဲ့တက်မယ်” “ဒီလိုဆိုညနေကတည်းကမင်းဆော်အိမ်နားမှာဝါးလှေကားသွားထားမယ်ကွာ။
ညကျမှတက် ကြတာပေါ့” “အေး ဟုတ်တယ်ငရဲမင်းအကြံမဆိုးဘူး” “အေးအရက်သောက်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟ၊တော်ကြာပြုတ်ကျလို့သေအုံးမယ်”. အေးပါကွာ” ညနေကတည်းက ငချစ်ဆော်အိမ်နားလှေကား ကိုထားခဲ့ပြီးညလူခြေတိတ်မှ လှေကားယူပြီး ငချစ်ဆော်အိမ်သွားကြတယ်။ကျနော်နဲ့ဇိုးရီးကလှေကားထိပ်မှာအဝတ်ပတ်ပေးပြီးနောက် နံရံမှာဖြေးဖြေးချင်းထောင်လိုက်တယ်။ငချစ်လည်းပုဆိုးတိုတိုဝတ်ပြီးတက်သွားတယ်။ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အောက်ကစောင့်ပေါ့ဗျာ။မ ကြာပါဘူး။ငချစ်ဆော်ရဲ့အဖေနိုးလာပြီး အောက်ဆင်းကာဓာတ်မီးနဲ့ဟိုထိုးသည်ထိုး လုပ်လို့ကျနော်နဲ့ဇိုးရီးပြေးရတာပေါ့။ “ဟေ့ကောင်တွေ ဘယ်သူတွေလဲ” ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လည်းပြေးတော့နောက်ကနေလိုက်လာတယ်။ငချစ်တော့ဘယ်လိုကြံခဲ့မယ်တော့မသိဘူးလေ။ လွတ်ရာပြေးပြီး “ဇိုးရီးရေ ငချစ်တော့ရွာပတ်ပြီလားမသိဘူး” “အေးကွာဒီကောင်သနားပါတယ်” “အဆင်ကိုမပြေဘူး” “အေး ကွာ အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ” “ကိုမင်းအိမ်ဖက်သွားမယ်ကွာ” “အေးအဲဒီကအခြေအနေကြည့်ကြတာပေါ့” ကိုမင်းအိမ်ရောက်တော့ “ဟေ့ကောင်တွေ” “ဟာငချစ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟ” “အာ…..အဖိုးရီးအသံကြားကတည်းကငါသိတယ်ပြသနာတက်တော့မယ်လို့အဲဒါနှင့်မင်းတို့နောက်အဖိုးရီးလိုက်တော့ငါအိမ်ရှေ့ကဆင်းလာလိုက်တာကွာ၊ပြီးတော့ကိုမင်းအိမ်ပဲလာ လိုက်တော့တယ်” “ဟီး ဟီးမင်းအဆင်ပြေခဲ့လား’” “လိပြေမှာလား” “အေးပါကွာ မင်းကလည်းစိတ်လျှော့” “မလျှော့လို့မင်းကိုလုပ်ရမှာလားဟ” “ဟေ နေပါကွာငါလိုးရဲ့” နောက်တနေ့တော့ ငချစ်တစ်ယောက်မီးမီးနဲ့စကားပြောနေတာတွေ့ရတယ်။မီးမီးကရယ်လို့မောလို့ဗျ။တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲလို့တွေးမိတယ်။ဇိုးရီးကမလာသေးတော့ကျနော်ငချစ်ဆီသွားပြီးမေးလိုက် တယ်။
“ဟေ့ကောင်ငချစ် မီးမီးနဲ့အဆင်ပြေနေပါလား” “အေးကွ ဘယ်ဘိုဖြစ်တာလဲမဟိုင်းက” “အေး ဇိုးရီးနှင့်မီးမီးပြတ်သွားပြီကွ” “အေးလေ နှင်းဖြူကိုဒီကောင်ဆော်လိုက်ပြီဆိုတော့” “အေး မီးမီးကငါ့ကိုအထာပေးနေပြီ” “ဟေ ဟုတ်လား” “အေးဟုတ်တယ် ငါ့ကိုဟိုတနေ့ကိစ္စကိုမေးတယ်” “ဘယ်ကိစ္စလဲ ” “ငါ့ဆော်နဲ့ကိစ္စကိုလေ” “အေး မင်းဘာပြောလိုက်လဲ” “အဆင်မပြောဘူးလို့၊အဲဒါသနားပါတယ်တယ်တဲ့၊ငါလည်းဘာကိုသနားတာလဲလို့” “သူကဘာပြောသေးလဲ” “နင်ငတ်နေတာသိလို့သနားတယ်လို့ပြောတာတဲ့၊အဲဒါနှင့်နင်သနားရင်ငါ့ကိုကျွေးပါလားလို့” “ဟိုက် မလွယ်ပါလား” “အေးကျွေးမယ်တဲ့” “ဟ မီးမီးလည်းမလွယ်ပါလား” “အင်း လေဟိုကောင်ဇိုးရီးကသွားဆွတာကိုး” “အေးလေ မင်းကိုကြွေရင်မင်းရပြီပေါ့ကွာ” “အေးဒီနေ့ငါသွားမယ်” “အေး ငါပါလိုက်မယ်” “အေးကောင်းတယ်ကွ” “မင်းဘယ်မှာချိန်းထားလဲ” “အရီးမြတို့အိမ်မှာလေ” “အေး ကွ ငါလာချောင်းမယ်” “အေးငါအရင်လစ်မယ်” “အေးလစ် လစ်ငါအခြေအနေကြည့်ပြီးလာခဲ့မယ်” ကျနော်အခြေအနေကြည့်ပြီးအရီးမြတို့အိမ်ဖက်ကိုရောက်တယ်။အိမ်ဖက်ရောက်တော့အိပ်ခန်းဖက်မှာအပေါက်ရှာပြီးချောင်းရတာပေါ့ ငချစ်တစ်ယောက်ကောင်းစားနေပြီဗျ။လူကမတ်တပ်ကြီးရပ်ပြီးမျက်လုံးမှိတ်ကာညည်းနေတယ် “အာ့ အိုး ရှယ်ပဲမီးမီးရယ်” ကြည့်ရတာမီးမီးလည်းငချစ်စွဲသွားအောင်ပညာကုန်သုံးနေသလားမှတ်ရတယ်။
ဒူးလေးထောက်ပြီးခေါင်းမော့ကာငချစ်လီးကိုစုပ်နေတာအဝတ်အစားတွေတောင်မရှိတော့ဘူး။မီမီးဖင်ကြီးကိုနောက်ကမြင်ရတာစွင့်ကားနေတာပဲ “ပြွတ် ပြွတ် ဘွတ်ဘွတ်” ငချစ်လည်းငြိမ်မခံဘူးဗျ။မီးမီးခါင်းကိုင်ပြီးမီးမီးပါးစပ်ကိုလိုးနေတာ။အသံတောင်တပြွတ် ပြွတ်တဘွတ်ဘွတ်ထွက်နေတယ်၊ကြည့်ရတာအရမ်းဖီးလ်ရှိတယ်။ကျနော့်လီးတောင်တဆတ်ဆတ်တောင်လာတယ်ဗျာ။ငချစ်ဘယ်လောက်တောင်တင်းနေလဲမသိဘူး။ငါးမိနစ်လောက်နဲ့ရပ်သွားတယ် “အော့..ဝေါ့..ထွီ ငချစ်နင်လုပ်လိုက်ရင်တလွဲပဲ”မီးမီးမှာပါးစပ်ထဲကသုတ်တွေကိုထွေးထုတ်ရင်း “ဆောရီးဟာ ငါအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပြီးသွားတာဟ” “အာ့ဆိုအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “ငါနင့်ကိုပြန်လုပ်ပေးမယ်” “တကယ်လားငချစ် ဟီးငါလည်းအလုပ်ခံချင်နေတာ” “အေး ငါနင့်ကိုလုပ်ပေးရင်တောင်လာမှလိုးမယ်ဟာ” “ပြန်တောင်နိုင်လို့လား နင်က” “ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်။မလိုးနိုင်ရင်လီးဖြတ်ပြီးခွေးစာကျွေးပစ်မယ်” “ဟီဟိ ဒီလိုမွေပါ့” “လာ နင်ပက်လက်လှန်လိုက်တော့” မီးမီးပက်လက်ကလေးလှန်တယ်။အဲအချိန်မှာမီးမီးနို့တွေဆိုလည်းတင်းနေတာနိုးသီးခေါင်း လေးတွေတောင်ထောင်ပြီးရဲနေတာ။ရင်သား တွေမှာလည်းအနီကွက်လေးတွေတောင်ထနေ ပြီ။
ငချစ်မီးမီးပေါင်ကိုကားလိုက်ပြီးပေါင်ကြားထဲခေါင်းထိုးဝင်လိုက်ကာ ယက်တော့တာပဲ။ ငချစ်ယက်သံတပြွတ်ပြွတ်ကြားရတယ်။ “ဟားးးအာ့ အိုးရှီးရှီးကောင်းလိုက်တာငချစ်ရယ်’ မီးမီးရဲ့အော်ညည်းသံကလည်းအရမ်းကောင်းနေတယ်။မီးမီးတစ်ယောက်ကော့လန်နေတာပဲ အိပ်ရာခင်းစလေးကိုဆွဲပြီးအော်ညည်းနေ တယ်။ငချစ်ခေါင်းကတော့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ တလှုပ်လှုပ်ပေါ့။ယက်သံစုပ်သံကဝါးထရံအ ပြင်ကိုထိုးထွက်နေတာ “အားရှီးရှီး င ချစ်ငါမနေနိုင်တော့ဘူး.အားးး ဟားးး” “ငါလိုးလို့ရပြီလား” “လိုးတော့ငါအရမ်းကောင်းနေပြီ”ကျနော်ဘေးတိုက်မြင်ကွင်းကနေ နေရာပြောင်းပြီးအပေါက်ရှာလိုက်တယ်။ငချစ်နောက်ကျောတည့်တည့်အပေါက်ရှိတော့အ ဆင်ပြေတယ်။ဟီး ဟီးနေရာစုံကမြင်ရဖို့အတွက် အပေါက်တွေရှာရတယ်။မုဆိုးမအိမ်ပဲဗျာ။ပြင်ပေးမယ့်သူမရှိတော့အပေါက်ကရှိတာပေါ့ ကျနော်ချောင်းကြည့်နေချိန်မှာပဲငချစ်ကမီးမီးပေါင်ကိုအပေါ်မြှောက်တင်ပြီးသူဒူးထောက်ပြီးမီးမီးကိုစလိုးတယ် “ပြွတ် ဘွတ် ဘွတ်” “အု ဟု အု အာ့ အားးဟား’” “ငချစ်ဖြေးဖြေးဟနာတယ်” “အေးပါဟ” “ဗျစ် ဗြစ် ဖြစ် ဖြစ် ….ဘွတ်ဖတ်. ဖတ်” “အာ့ အားးအိုး ရှီးရှီးးးအိုး.ငချစ်ရေဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးဟယ်” “ကောင်းလား” “ကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူး၊နင့်လီးကြီးကငါ့အဖုတ်ထဲသပ်လျှိုထားသလိုပဲ” “အေးတော်ကြအရည်တွေထွက်လာရင်နင် ကောင်းသွားမှာ” “ဗျစ် ဗြစ် ဖြစ် ဖြစ် ….ဘွတ်ဖတ်. ဖတ်ဖန်းဖန်း”လိုးသံနှင့်ဂွေးဥကမီးမီးဖင်ရိုက်သံတွေထွက်လာတယ်။
“အာ့ အင့်ဟင်းးဟင်းးအင်းးးကောင်းလာပြီ ကောင်းလာပြီ” ငချစ် ရှေ့ကိုအားစိုက်ပြီးမီမီးကိုအသားကုန်လိုးတော့ မီးမီးဖင်ကြီးကအေပ်ါကိုကြွတက်တယ်။ဖင် ပြောင်ကြီးနှစ်ခုကကျနော်ရှေ့မှတဖတ်ဖတ် ဘွတ်ဘွတ်မြည်နေအောင်လိုးနေကြတာအားရစရာကြီးပါ။တချက်တချက်ငချစ်လှော်ချက် ကြောင့်အိမ်တောင်သိမ့်ကနဲသိမ့်ကနဲပဲတချက်တချက်မီးမီးရေခရေပွင့်ကြီးကဟစိဟစိနဲ့ဗျ။ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူးပုဆိုးဂွင်းသိုင်းပြီးဂွေစလှိမ့်တယ်။လီးတောင်အရည်တွေထွက်လို့စိုစိစိုစိဖြစ်နေပြီ။ဗီဒီယိုကြည့်နေရသလိုမဟုတ်ဘူး ကြည့်ရတာစိတ်အရမ်းပါတယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်မေ့နေပြီ “ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်းးဖန်း ဖန်း’ “အာ့ဟာ့ အားးးငချစ် အိုးးးရှီးရှီးး” “ဇွပ်ဖတ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်း” “အိုးအားး အင့် ဟင့် ဟင့် ငချစ်ရယ်” မီးမီးစိတ်တွေမတရားထလာပြီးငချစ်ကိုလှမ်းဖက်ကာခြေနှစ်ချောင်းကိုငချစ်ခါးကိုခွပြီးလိမ်ထားသေးတယ်။အဲဒီလိုကြားထဲကငချစ်အပီအပြင်လိုးနေတာဗျ “ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်းးဖန်း ဖန်း’ “အိုးအားး အင့် ဟင့် ဟင့် ငချစ် ငါပြီးတော့မယ် အားနဲ့လိုးပေး ” “ဇွပ်ဖတ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်း” “အာ့ဟာ့ အားးးငချစ် အိုးးးရှီးရှီးး” ငချစ်အသားကုန်ကျုံးလိုးနေတယ်။မီးမီးတဏှာသံကအားရပါးရအော်နေတယ် “ဇွပ်ဖတ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်း” “အားးငချစ် ပြီးပြီပြီးပြီ ငါပြီးပြီအားးး” ငချစ်နောက်ထပ်အချက်နှစ်ရာလောက်ထပ်ဆောင့်ပြီး “အားးမီးမီး ငါလည်းပြီးပြီအားးးး” “မီးမီးကောင်းလား” “အင်းကောင်းတယ်ကိုကိုချစ်”သူတို့နှစ်ယောက်ကပြေလည်ပြီးတီးတိုးတီးတိုးသဖန်းပိုးလုပ်ချိန်ကျနော်ဂွေလှိမ့်ကောင်းနေတုန်း “ဟေ့ကောင်ငရဲ နင်ဘာလုပ်” “ဟာ…အရီးမြ” “ကြည့်စမ်းခွေးကောင်လေးငါ့အခန်းဖဲချောင်း ပြီးဂွင်းထုနေတယ်ပေါ့..ဟုတ်လား” “မဟုတ်ဘူး အရီးမြ အခန်းထဲကြည့်” အခန်းထဲမှာဟိုနှစ်ယောက်ကျနော်တို့အသံ ကြားပြီးအသည်းအသန်အဝတ်စားတွေဝတ်နေကြတယ်။ “အမလေးငချစ်..နင် နင်..ငါ့အိမ်မှာမီးမီးနှင့်စ ကားပြောချင်လို့တဲ့အခုတော့လိုးပါလိုးနေကြ ပါလားဟေ့” “ငချစ်မှာပြုံးစိစိနှင့်အိပ်ခန်းထဲကထွက်လာ တယ်.မီးမီးကရှက်လွန်းလို့ဆိုပြီးအိပ်ခန်းထဲကထွက်မလာတော့ဘူး။အရီးမြလက်ချက် ကြောင့်ငချစ်နှင့်မီးမီးယူလိုက်ကြရတော့တယ်။အခုတော့လည်းမီးမီးတစ်ယောက်ငချစ်ကို ကိုကိုချစ်လို့ခေါ်နေတော့တာပါပဲ” ……… ပြီးပါပြီ။